ဒါဖတ်ပြီမှ မြန်မာပြည်က ကိုရီးယားရုပ်ရှင်များ ကြည့်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ဒါဖတ်ပြီမှ မြန်မာပြည်က ကိုရီးယားရုပ်ရှင်များ ကြည့်ပါ
ဒါဖတ်ပြီမှ မြန်မာပြည်က ကိုရီးယားရုပ်ရှင်များ ကြည့်ပါ
Posted by poetic on Apr 2, 2010 in Other - Non Channelized | 13 comments
န်မာပြည်ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ကိုရီးယားကားတွေ နေရာယူလာတာ နှစ်နဲ့ချီခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း စွဲလမ်းတကြီး ကြည့်ခဲ့တာဆိုတော့ အခုပြောရမည်မှာ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းသလို ဖြစ်နေသည်။သို့ပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါ။ အမှန်တရားကိုတော့ ပြောရမည်။
MRTV မှာ ကိုရီးယားကားတွေကို အပတ်စဉ်ပြလာသည်မှာ မြန်မာကားများ၊ မြန်မာဗီဒီယိုများက နေရာ ဖယ်ပေး လိုက်ရသည်။ MRTV တင်မကပါ မြ၀တီ MWDနှင့် MRTV4 မှာ ၎င်း၊ ထို့ပြင် ပိုက်ဆံပေး ကြည့်ကြရသော5movies ဆိုသည်မှာရော၊ ကိုရီးယားကားပါမှ လူကြည့်နေသည်။ MRTV တွင် အပတ်စဉ် ၃ ကား၊ MWDတွင် အပတ်စဉ် ၄ ကား၊ MRTV4 မှာ အပတ်စဉ် ၁ ကား၊5Movies မှာ တော့ ဘယ်နှစ်ကား ပြနေလည်း မသိ။ ထိုကိုရီးယားကားတွေ ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း အားပေးကြသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ ထိုသို့ ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရိုးအီသွားခြင်းမရှိဘဲ အပြင်ဆိုင်များကပင် ကိုရီးယားကားသစ် ကားဟောင်းများကလည်း တော်တော် အ၀ယ်လိုက်ကြသည်။ မြန်မာ့တီဗီဆိုပြီး ကိုရီးယားကားများနှင့် နှစ်ပါးသွားနေရသည်မှာ မြန်မာကားများ ရှက်စရာ ဖြစ်နေသည်။ သို့သော် မတတ်နိုင်ပါ။ ပရိသတ်၏ဆန္ဒကို ဘာမှ မလွန်ဆန်နိုင်ပါ။ ဒီလိုနှင့်ကြည့်လာရင်းနှင့် ကိုရီးယားကားများ၏ သဘာဝများ၊ ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ပုံများကို တီးမိ ခေါက်မိလာရသည်။
ညအချိန်မတော် အပြင်ထွက်၊ မင်းသားနှင့် မင်းသမီး အချိန်မတော်လည်း ထွက်တွေ့၊ မင်းသားသည် ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ သူဌေးသမီး၏ သေလုအောင် ကြိုက်ခြင်းကို ခံရ၊ ထိုမင်းသားကလည်း ထိုသူဌေးသမီးကို မကြိုက်ဘဲ ဆင်းရဲလှသည်ဆိုသော မိမရှိ ဘမရှိ၊ သူများအိမ် ကပ်နေရသော မင်းသမီးကိုမှ ကြိုက်လိုက်ပုံများ၊ ထိုအဆိုပါ သူဌေးသမီးခင်ဗျာ ဘွဲ့တွေ ဘယ်လောက်ပဲရရ၊ မိဘက ချမ်းသာ ချမ်းသာ၊ အဆင့်အတန်း ဘယ်လောက်ရှိရှိ ထိုဆင်းရဲသော မင်းသမီးကို သောက်သောက်လဲရှုံးလိုက်ပုံကို အားပါးတရ ရိုက်ပြတတ်ခြင်း၊ သူတို့ မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သားယောကျာင်္လေးကို သမီးထက်ပို အလေးပေးသည်ဟုသာ ကြားဖူးသော်လည်း ထိုကိုရီးယားကားကြမှ သမီးတွေကို မင်းသမီးလေးဟု တဖွဖွခေါ်ကာ သားဖြစ်သူကို ချောင်ထိုး အပြစ်တင်၊ ဂရုမစိုက်နေ နှိမ်ချပုံများသည် တဖက်စွန်းရောက်လွန်းသည်ဟု ထင်မိသည်။
မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ ရောက်လာကာ အရွယ်ရောက်လာကြသော မင်းသား မင်းသမီးတို့မှာ တခြားသော မိရှိ ဘရှိ၊ အဆင့်အတန်းရှိ၊ သူဌေးသား သူဌေးသားသမီးတို့ကြား မျက်နှာပွင့်လျက် အစစအရာရာ အောင်မြင်နေပုံများကို ပြသည်မှာလည်း တော်တော်လွန် နေပါသည်။
သူဌေးသား သူဌေးသမီးများမှာ ကိုယ်ချစ်ရသောသူတွေနှင့်လည်း ဆင်းရဲသားသမီးများ၏ လုယူခြင်းကို ခံရရုံမက ၎င်းတို့မှာ မကောင်းမှုဟူသမျှကိုလည်း ကျူးလွန်ကြပုံ၊ ပရိသတ် အမြင်မှာ အမုန်းခံနေကြရပြီး အော် … သူတို့နိုင်ငံမှာ လူချမ်းသာ သားသမီးတွေ တော်တော်ဆိုးတာပဲ။ အောက်တန်းကျ လိုက်တာ၊ မိဘမဲ့ဂေဟာက သူတွေများ ကောင်းလိုက်ကြတာ၊တော်လိုက်ကြတာ.. ဟူသောအမြင်များ ဖြစ်လာရပါသည်။
ထို့ပြင် သူဌေးသမီးကို မယူဘဲ ဆင်းရဲသူ မင်းသမီးကိုယူပြီး ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေပြ၊ အချစ်သာ အရေးကြီးပါတယ်ဟု ရိုက်ပြ၊ ဆင်းရဲသူမင်းသမီးကလည်း သူ့ကို သေလုအောင်ကြိုက်နေသော သူဌေးသားကိုမယူဘဲ ဆင်းရဲသားကိုယူ ဆင်းရဲတွင်းထဲခုန်ချ ၊ မင်းသား မင်းသမီးတွေကတော့ ကြိုက်မယ့်သူတွေ တပုံကြီးရှိပြီး သူဌေးသား သူဌေးသမီးသို့ မဟုတ် သူတို့ကို ကြိုက်လှပါချေရဲ့ဟု ပြောနေသော နဘေးက သူတွေမှာတော့ ကြိုက်မယ့်သူ တယောက်မှ မရှိပုံ၊ ထိုသို့သော ရိုက်ချက်များကိုလည်း ကိုရီးယားမင်းသား မင်းသမီး အချောအလှများက မရိုးအီနိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နေကြသည်ကို မြန်မာပရိသတ်များကလည်း မင်းသား မင်းသမီးလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အချိန်ကုန်နေကြသည်။
သူဌေးသမီးသည် မိဘသဘောမတူသော ဆင်းရဲသားမင်းသားနောက်သို့ မိဘများကို စုံကန်၍ လိုက်ကာ ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေရသည်ကိုပင် သဘောတွေ့၊ မကြုံဖူးသောသုခကို ခံစားရခြင်းဟု အပျော်လွန်ပုံတွေကိုပြ၊ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း ဆင်းရဲတာ ကောင်းလှချေလား၊ ဆင်းရဲချင်လိုက်တာဟု အားကျရမလိုလိုတွေဖြစ်ကုန်ခြင်း။ မိဘများ အသည်းတွေကွဲပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်ကို အားမနာပါးမနာပင် ဆင်းရဲသားမင်းသားက ပက်ပက်စက်စက်ပြောပြီး၊ သူတို့သမီးကို ခေါ်သွားပြီး ဇာတ်သိမ်းပြတတ်ပုံများမှာလည်း တော်တော်ရိုင်းစိုင်းသော ပြကွက်များဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မနူးမနပ်အရွယ်ကလေးတွေ စာကို စိတ်မ၀င်စားဘဲ အပြင်ထွက် အလေလိုက်၊ မင်းသားတွေနှင့် တွေ့ ကြိုက်ကြ၊ ချိန်းတွေ့ကြ၊ ထိုမင်းသား၏ သဘောတူထားသူ သူဌေးသမီးက နောက်ကောက်ကျ။ အရှက်ကွဲပုံ၊ ထိုဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ကလေးတွေ မကောင်းတာတွေကို လမ်းမှားလိုက်ပုံကို အကောင်းဘက်ကကြီးပဲ ရိုက်ပြပြီး နောက်ဆုံး အားလုံးကို အနိုင်ယူ ကျော်တက်ပုံတွေ၊ နောက်ဆုံး မှားမိပါသည်၊ ခွင့်လွှတ်ပါ ဟူသော သင်ခန်းစာမျိုး ပေးသည်မှာလည်း အကုန်လုံး လိုက်လျောပြီး လုပ်ချင်တာ အကုန်လုပ်ပြီးမှ ရယ်စရာလို ရိုက်ပြသည်မှာလည်း တော်တော် အားကျစရာ ဖြစ်ရသည်။
တခါတရံ ဇာတ်အိမ် ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် စထားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နောက်ဘာဖြစ်မည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်သော ဇာတ်အိမ်မျိူး ဖြစ်လာပုံတွေ၊ ဒီတခါတော့ မဆိုးဘူးဟ ဟု ကြည့်နေရင်းကပင် ဇာတ်လမ်းက တဖြေးဖြေးယိုယွင်းလာကာ ဇာတ်ကိုအတင်း သိမ်းပစ်လိုက်တာတွေကလည်း နားလည်ရခက်လှသည်။
တခါတလေ မြန်မာ့အသံက ဟိုကျော် ဒီခွ၊ အဖြတ် အတောက်များကလည်း ရှိနေပြန်ရာ ဟော … ဒါ ပါးရိုက်လိုက်တာ ဖြစ်ရမယ်။ ဒါ ဆွဲထိုးလိုက်တာ ဖြစ်ရမယ်။ ဒါကတော့ အကြင်နာပေးလိုက်တာပဲ။ ဒီအခန်းကတော့ ကြည့်ရတာ မိဘကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပြန်ပြောလိုက်ပုံရတယ်။ ဟာ … ဒီအခန်းက အစိုးရကို ထိခိုက်တဲ့ စကားတွေ ပါ ပုံရတယ် …. ဟု မကြည့်ရ ကျော်ပစ်လိုက်သော အခန်းများကို ခန့်မှန်းရသော အခန်းများကလည်း ရှိနေသေးသည်။
ငါးစိမ်းသည် သားသမီးများ၊ ထမင်းဟင်း အရာင်းဆိုင်ဖွင့်သော သားသမီးများ၊ ဘွဲ့မရ ကျောင်း တ၀က်တပျက်၊ အပြင်မှာ ရရာ အလုပ်လုပ်ပြ၊ ကူလီထမ်း ဈေးရောင်း လုပ်ပြသူများမှာ မျက်နှာပွင့်လန်းလျက်ရှိကာ ဘွဲ့ရပညာတတ် သူဌေးသား၊ သမီးများမှာ မျက်နှာမရ စုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင် ရိုက်ပြတတ်သည်မှာလည်း မမျှတဟု မြင်မိသည်။ အမှန်တကယ်တော့ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွပါ။ ဒီလောက်ကြီးလည်း နှိမ်စရာ မလို၊ မြှောက်ပင့်စရာ မလို၊ အားလုံး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရှိရမည်။ သူဌေးဖြစ်ပြီး စိတ်ကောင်းမရှိလျှင် ဘယ်သူမှ မကြိုက်။ ဆင်းရဲပြီး အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းလျှင်လည်း လက်မခံနိုင် ဖြစ်ရမည်။ တခါလာလည်း ဒီလိုချည်း ပြပြနေသည်မှာ ကြာတော့ စိတ်ညစ်မိသည်။
သူဌေးသမီး ပြလိုက်သည်နှင့် ဘယ်တော့ အရှက်ကွဲမလဲ ဆိုတာ ကြိုသိနေသည်။ ဆင်းရဲသားမင်းသား ပြလိုက်သည်နှင့် သူ့တော့ ဟိုသူဌေးသမီးက သေလုအောင် ကြိုက်ပြတော့မည်ဟု အတတ်သိနေသည်။ ဈေးရောင်းနေသည့် မင်းသမီးပြလိုက်သည်နှင့် မင်းသားက သူ့ပဲ ကြိုက်မှာပဲဟု သိနေပြန်သည်။ သူဌေးသားလည်း ပြရော အင်း … သူကတော့ ဟိုဆင်းရဲသူမကို ကြိုက်တော့မည်ဟု ကြိုသိရပြန်သည်။ နောက်ဆုံး သူဌေးသားသမီး နှစ်ဦး ငေါင်းစဉ်း ကျန်ရစ်တော့ ပေမည်ဟု သိသိကြီးနှင့်ပင် ညစဉ် ညတိုင်း မပျက်မကွက် ကြည့်ကာ မီးပျက်လျှင်တောင်မှ မီးစက်ဖွင့်၊ အင်ဗာတာဖွင့်နှင့် မကြည့်ရလျှင် ညအိပ်မပျော်မှာကို စိုးရိမ်ပြီး နှလုံးရောဂါ ရမတတ် ကိုရီးယားကားများကို အားပေးနေကြရသည်။
ထို့ပြင် ယုတ်မာမှု ကောက်ကျစ်မှုများကို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ပြတတ်ခြင်းများသည် ဒါမျိူး အပြင်မှာ ရှိချင်လည်း ရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာပြည်သားတို့မှာ ဒါတွေကို ကြည့်ရ မြင်ရသည်မှာ သင်ခန်းစာလည်း မရဘဲ စိတ်ဓါတ် ကျစရာများသာ ဖြစ်ရသောကြောင့် ဒါမျိူးတွေ တမင်သက်သက်များ ပြနေသလားဟုပင် ထင်မြင်နေမိပါတော့သည်။ အဓိက မင်းသား မင်းသမီးများသည် ကျောင်းလဲ ပြေးပြသည်၊ ဆရာမများကိုလည်း မရိုမသေ ဆက်ဆံပြသည်။ မိဘကိုလည်း လိမ်ညာကာ ညအချိန်မတော် ခိုးထွက်ပြသည်။ စာမေးပွဲလည်းကျ ပြသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ဂုဏ်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းခြင်းမရှိဘဲ နဘေးကလူများကို အရူးလုပ်ပြသည်။ အိမ်ထောင်ရှိလျက်နှင့်လည်း ဖောက်ပြန်ပြသည်။ နောက်ဆုံး သူတို့ နှစ်ဦး လက်ချင်းတွဲလျက် နောက်ကလူတွေ ဘာဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ် ကျန်ရစ် ထွက်ပြေးကာ ဇာတ်ကို သိမ်းပြသည်။
နောက် ဆိုးဝါးတာ တခုကတော့ ကိုရီးယားအဓိက မင်းသမီးက ဆရာဝန်ပေါက်စန ဖြစ်နေ၊ ပြီးတော့ ဆေးမကုတတ် ကုတတ်နဲ့ လူနာကို လျှောက်လုပ်ပြ၊ လူနာဟာ အသက်ဆုံးရူံးတဲ့အထိ ပေါက်ကတရတွေဖြစ်ပြ၊ ရယ်ရမလို ငိုရမလို၊ အားကျရ မလိုလို။ ဒီက မတတ် တတတ် ဆရာဝန်ပေါက်စနတွေက ကြည့်ပြီး အားကျကုန်ကြမှာကိုတောင် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေသည်။
နောက်ဆုံး ခက်ပုံကတော့ ကိုယ် ကြိုက်လှပါသည်ဆိုသောမင်းသား မင်းသမီး တွေကို ကိုယ်လက်မခံနိုင်သော ယဉ်ကျေးမှုမညီမျှသည့် အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် မြင်နေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့ သူ ဘာလုပ်ပြပြ လက်ခံနေရသည်။ သူဆုံးဖြတ်တာ ဟူသမျှ မှန်နေရသည်။ ဒီလို မလုပ်သင့်မှန်း သိရက်နှင့် သူက ကိုယ် နှစ်သက်သော မင်းသမီး မင်းသားဖြစ်နေတော့ ခွင့်လွှတ်နေရသည်။ အကျင့်စာရိတ္တအနေနှင့် လက်မခံနိုင်သော အပြုအမူတွေ လုပ်ပြနေသောလည်း ကိုယ်ကြိုက်သော မင်းသမီး မင်းသားဖြစ်နေ၍ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေရသည်။
ဒါကြောင့် ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပြီး သေချာ လေ့လာကာ မယူသင့်သော ယဉ်ကျေးမူများ၊ အလေ့အထများ အတွေးအခေါ် အမူအကျင့်များကို အားမကျမှ ဖြစ်တော့မည်။ ကိုယ် နှစ်သက်သော မင်းသမီးဖြစ်သော်လည်း၊ ကိုယ်နှစ်သက်သော မင်းသား ဖြစ်နေသော်လည်း ယဉ်ကျေးမူနှင့် မညီသော အပြော အဆို အမူအယာများကို သေချာ ဆင်ခြင်ကာ ကြည့်သင့်လှပေသည်ဟု တွေးမိရင်း ဒီစာကို အမုန်းခံပြီး ရေးလိုက်ရပါသည်။
ဆရာစိန်ခင်မောင်ရီ မကွယ်လွန်မီက သူ၏ နံမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးများ၏ ခေါင်းစဉ်က “ဒါဖတ်ပြီးမှ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်ကလည်း သူ့ဆောင်းပါး ဖတ်ဖတ် မဖတ်ဖတ် ရုပ်ရှင် ကြည့်ကြတာပါပဲ။ ဆရာသာ ကိုရီးယားကား ကြည့်မိလျင် ဘာပြောမည်မသိ။ အခုဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီးလျင်လည်း ကိုရီးယားကား ဆက်ကြည့်ကြဦးမှာ ဖြစ်သည်။ ကဲ … ကိုရီးယားကား မကြည့်ဘဲ ဘာသွားကြည့်ကြမှာလဲ … (မီးလဲ လာခဲ့ရင်ပေါ့လေ …)။ ။
I am in full support of your personal opinion, Mr. Poetic. Now, the entire Myanmar people are completely fascinated by romantic Korean TV series, which are based on nonsense stories, thus implying the fact that in general the intellectual power of Myanmar people is very low.
ကျွန်တော်လည်း ဗွီနိုထွန်းသီချင်းကြားပြီးကတည်းက ကိုရီးယားကား မကြည့်တော့ဘူး
ကျွန်တော်တို့က သဘာဝ ကိုကြိုက်တာ
ဝေဖန်ထားတဲ့စာရေးသူလည်း ကိုရီးယားကားတော်တော်ကြည့်ပြီးပြီထင်ပါရဲ့နော် ။
ကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူတွေက လှတာမတ်ပြီးညစာခက်နေကြတာပါ မိန်းကလေးဘက်ကစကြိုက်တာလည်းပါသေးတယ် အခုလည်းဒီမှာဖြစ်နေပါပြီလေ မြန်မာအနုပညာရှင်များလည်း ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်
ကိုရီးယားကားတွေမှာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မတိုင်ခင်က ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ တရုတ်ကားတွေထက်တော့ အနည်းငယ် သာလာပါတယ်။ တွေးစရာ၊ သင်ခန်းစာယူစရာတွေလည်း အထိုက်အလျောက်တော့ ပါကြပါတယ်။ ခါးအောက်ပိုင်းတွေ များလာတဲ့ မြန်မာကား အတော်များများထက်တော့ သာနေသေးတယ်လို့ဆိုရင် လွန်နေမလား…
ဟုတ်ပါတယ် ကိုရီးယားကားတွေကတော့ မရှည်ရှည်အောင် ဇာတ်အိမ်ကို ဆန့်ဆွဲပြီးတော့ ရိုက်နေကြတာပါ။ တချို့ကောင်းတဲ့ကားတွေလဲ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေက ရှည်သာရှည်တာ ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကိုရီးယားကားတွေကို ကြည့်တာ ကြာလာတဲ့ ပရိတ်သတ်အတွက်ကတော့ ရှေ့ကိုမှန်းလို့ရသလို ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေကြပါပြီ မင်းသားမင်းသမီးလေးတွေကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်နေကြတာပေါ့။ ရှည်လျားလွန်းတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ပါများနေတဲ့ ကိုရီးယားဒါရိုက်တာများက တစ်နာရီစာ အချို့ဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်ရာမှာ ထုံးစံအတိုင်း အီဆွဲမရလို့ သိမ်းလိုက်တဲ့ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မြန်မာဇာတ်ကားတွေလဲ ကောင်းတဲ့ ကားတွေ ကောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေသေချာချာ ရွေးတတ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ရှည်လျားလွန်းတဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းရှည်တွေကို ကြည့်မယ့်အစား ဇာတ်အိမ်ခိုင်မာတဲ့ တစ်နာရီစာ ဇာတ်လမ်းကလေးတွေ (မြန်မာကားအပါအဝင်) ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးချယ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ပြောချင်တာတွေ လည်းဒီအတိုင်းပဲ..။ဘယ်သူဘာပြောပြော .. သူပြောတာ ထောက်ခံတယ်..။
ကောင်းတာတွေ အတုယူ သလို
မကောင်းတာ ကို ပိုပြီး အတုယူနေကြတယ်
pyaw ya mal so yin taw. myanmar movie tway lae bar htoo loh lae. Korea movie ka mah ma kg taratu ma u pae kg taratu u tet yinatu u loh ya tay tal. hoat bu lar. ma kg te movie tway lae shi par tal. kg tar lay tway choice kyi port
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘာသာတရား၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အတုမခိုးသင့်တဲ့၊ ဇာတ်လမ်းတွေကို အစဉ်တစိုက်ပြသနေတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးကလည်း သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းပါး၊ စဉ်းစားဥာဏ်မရှိ (လူအတော်များများပါ) အတုမခိုးသင့်တာကို အတုခိုးဆိုတော့ ဒီလိုကားတွေ မပြသင့်ပါဘူးဗျာ။
ဘာတဲ့ ကိုးရီးယားသွား ကိုးရီးယား xxx တယ်ဆိုလားပဲ
ဒါတွေဟာ သေသေချာချာ အကွက်ကျကျ စီစဉ်ထားတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့များပါတယ်…။ ဒါမှ လူတွေ တစ်ခြား အာရုံမရောက်အောင်လို့လေ……..။ ပြီးတော့ ဘောလုံးပွဲတွေ လောင်းကြေးရှိတဲ့ ပွဲတွေဆို အရင်က ခိုးချောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရတာ….။ ခုတော့ သတင်းစာထဲမှာ တီဗွီ ထဲမှာ ပေါ်တင်မြင်နေရပြန်ပြီ……..။ ဘယ်လိုလုပ် လောင်းကစားမှု ပျောက်မလဲ……..။ ရှေးတုန်းက မြင်းပွဲတွေ တစ်ကြိုထွက်သလို ဘောပွဲတစ်ကြို ဂျာနယ်တွေကလည်းပလူပျံနေတာပဲ….။
Chan Chann – Korea Yaw Gar